“Riyadayda waa inaan ku guuleysto Champions League ka hor inta aan ka fariisan kubadda cagta” – Gool FM
Dajiye September 18, 2020
(Yurub) 18 Sebt 2020. Champions League ayaa ah tartanka ugu xiisaha badan heer kooxeed qaarada Yurub, iyadoo xiddig kasta ee kubadda cagta ciyaara uu xiiseynayo inuu mar uun uu ku guuleysto, kahor inta uusan ka fariisan ciyaarista kubadda cagta.
Xiddiga reer Germany ee Mario Gotze ayaa shaaca ka qaaday riyadiisa ah inuu ku guuleysto tartanka Champions League ka hor inta uusan ka fariisan ciyaarista kubadda cagta.
Mario Gotze oo sanadkii 2014-kii ku hoggaamiyay xulkiisa qaranka Germany ku guuleysiga koobka adduunka, ayaa wuxuu wali raadinayaa koox uu xirto maaliyadeeda kaddib marka uu dhamaaday qandaraaskii uu kula jiray kooxda Borussia Dortmund, kaasoo dhacay dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore iyadoo aysan jirin wali koox codsatay saxiixiisa, taasoo ka dhigan inuu yahay koox la’aan ilaa iyo hadda.
Wargeyska “kicker” ee dalka Germany ayaa wuxuu daabacay wareysi uu bixiyay Mario Gotze, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan rabaa inaan siiyo isla waqtiga loo baahan yahay si aan u gaaro go’aanka saxda ah”.
“Waxaan rabaa inaan tartamo, inaan isku muujiyo heerka ugu sareeya, iyo inaan muujiyo awooddeyda ah inaan caawiyo koox kasta, xiriirkeyga kubadda cagta waa mid aad u weyn”.
“Waxaan hayaa himilooyin hami leh runtiina waxaan doonayaa inaan ku guuleysto Champions League, waana taas waxa igu kalifaya inaan qaato cashiro tababar ah maalin kasta”.
“Ma doonayo inaan dhammeysto xirfadeyda kubadda cagta anigoo aan ku guuleysan ugu yaraan koobka Champions League”, ayuu yiri Mario Gotze.